Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Olona efatra naratra tamin'ny fanafihan'ny fiara tamin'ny alin'ny Taom-baovao tany Alemana
Lehilahy iray no niasa tany anaty vahoaka ny fiarany tamin'ny Alin'ny Taom-baovao tany Alemana, ary nandratra olona mpandeha an-tongotra efatra farafahakeliny tao amin'ilay antsoin'ny polisy alemana hoe "fanafihana kendrena".
"Farafahakeliny olona 4, ao anatin'izany ny teratany Syriana sy Afghana, no naratra mafy", hoy ny fanamarihana nataon'ny polisy. Tsy mbola fantatra mazava raha mpifindra monina ireo niharam-boina.
Nilaza ny polisy fa nanao fanambarana «xenophobic» ity olon-dratsy ity nandritra ny fisamborana azy.
Ilay olona ahiahiana 50 taona dia nanomboka nanenjika mpandeha an-tongotra voalohany tao amin'ny volafotsy Mercedes azy tao an-tanànan'i Bottrop any afovoany afovoany Alemana taorinan'ny misasakalina, hoy ny nambaran'ny mpitandro ny filaminana ny talata teo. Nanandrana namily ny mpandeha an-tongotra voalohany nahavita nandositra izy, talohan'ny nanohizany ny fihazana azy ary nitodika tany amin'ny vahoaka marobe teo amin'ny kianja iray teo an-toerana.
Avy eo dia nitodi-doha nankany amin'ny tanànan'i Essen, 9km atsimon'ny Bottrop ilay voarohirohy, ary nosamborin'ny polisy izy nony farany. Tao Essen, niezaka ny niasa tany amin'ny mpandeha an-tongotra ihany koa ilay mpanafika niandry teo amin'ny fiantsonan'ny bus.
Nandritra ny fisamborana azy dia nanao “fanamarihana xenophobic” izy, hoy ny polisy, ary nilaza fa mino ny mpikaroka fa “nokendrena” angamba ity fanafihana ity. Dikan-teny hafa dinihina dia mety ho marary saina izy.